Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ရာဇဝင်များနှင့် ကဗျာဆရာမ အတွက်
Writer Sein Lyan Time 4:50 pm
အိန္ဒြာ ကဗျာတွေ တော်တော်များများဖတ်ဖူးတယ်
ကြိုက်တယ်။ ဖိုးစိန်ဆုတောင်းပေးတဲ့အတိုင်း ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်
ကိုစိန် ရောက်လာပါတယ်..... စာတွေဖတ်သွားပါတယ်.... ကဗျာမရေးတတ်ပေမယ့် ခံစားသွားပါတယ်ကိုစိန်....
7 November 2009 at 17:44
မမအကြိုက်ဆုံးဝတ္ထုလေးတဲ့ အမှတ်တရ ပိုစ့်လေးတစ်ခု တင်ပေးတာအတွက်
ဒီဝတ္ထုလေးက စာပေစိစစ်ရေးမှာ စာမေးပွဲ ၃ ခါဖြေခဲ့ရတာ..
အပေါ်က ကိုအောင်ကြည်နဲ့ နောက်လာဖတ်ကြမယ့် ညီအကိုမောင်နှမတွေကိုလည်း
(ဖိုးစိန်လေးတော့ စင်ကာပူလာရင် မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်..နော်..။း))
သြော်.. သူတို့က ဒီလိုကိုး..
7 November 2009 at 20:04
တယောဆရာနဲ့ သူ့ကိုချစ်တဲ့ မိန်းမကို ရထားလမ်းပေါ်မှာ ဇာတ်လမ်းအဆုံးမသတ် လိုက်ပဲ
သူ့အနုပညာနဲ့ ရိုးသားစွာ ဘူတာလေးတခုမှာ ၀မ်းစာရှာ
ဖွေခြင်းကို အမြဲတမ်းလိုက်လျော နားလည်ပေးရတဲ့တ
ယောဆရာကတော်ကပဲ ရင်နင့်စွာနဲ့ခွင့်ပြု ပြီးပူးပေါင်းလိုက်ရတယ်ဆို. စာပေစီစစ်ရေးက တင်းမှာပဲနော် ခွင့်ပြုမယ်လည်းမထင်ဘူး.ကျနော့်ဘာသာဆက်ကြည့်တာပါ. ခုလည်းခံစားရပါတယ်ဗျား..အထူးသဖြင့် ကိုယ်တိုင်လည်း ခံစားမှုအားပါတဲ့ စာတွေရေးပြီး စာကောင်းတွေကိုလည်းတင်ပေးခဲ့တဲ့ ကိုဖိုးစိန်ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ. ညီရေ..ကိုဖိုးစိန်လို့ခေါ်တာ ခွင့်လွှတ်နော်.အသက်တန်းညှိနေတာ..
7 November 2009 at 20:29
8 November 2009 at 00:03
ဘဝနဲ့ချီပြောရရင် တသက်တာမှာ အလွတ်ရနေတဲ့ကဗျာရှည်ဟာ ကိုယ်တိုင်ရေးကဗျာနဲ့ မမအိန္ဒြာရေးပေးတဲ့ မွေးနေ့ကဗျာရှည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါတိုင်း မမရဲ့ ကဗျာလေးဖတ်ပြီး အားမွေးခဲ့တယ်။
နှလုံးသားလှတဲ့ မမစိုက်ခဲ့တဲ့ တင့်တယ်လှပလွန်းတဲ့ အနုပညာပန်းတွေဟာ ထာဝစဉ်ထာဝရမွှေးပျံနေမယ် ဆိုတာ အမြဲယုံပါတယ်။
အနုပညာ နဲ့ စာချစ်သူ ကဗျာချစ်သူတွေကောင်းကင်ထက်မှာ
“အိန္ဒြာ” ဆိုတဲ့ ကြယ်တစ်လုံး
အရမ်းကြိုက်.. ကောင်းမှကောင်း..း)
ပူဇော်ထိုက် လေးစားထိုက်သူကိုချီးမြင့်ပူဇော်ခြင်းက မင်္ဂလာတပါးကွယ်
သားလေးလမ်းညွန်လို့မနော်ဟရီ၊အိန္ဒြာ၊မိုးချိုသင်း၊ကိုရင်နော်၊မိုးကုတ်သား၊ဇက်၊မြစ်ကျိုးအင်း၊စတဲ့ စတဲ့ ဘလော့တွေကိုပေးဖတ်ရင်းကနေအန်တီစာဖတ်ခြင်းကိုစွဲလမ်းလာတာပါစာရေးမကောင်းဘူးတီလေးဖတ်ချင်အဲဒီဘလော့တွေဖတ်ဆိုပေမယ့်သားလေးရေးတဲ့စာတွေကတခါတလေရင်နစ်အောင်ခံစားရယ်
ခုမောင်မိုးကုတ်သားတင်ထားတဲ့ကဗျာတွေကိုကြိုက်တယ်မှတ်မှတ်ရရခုသားလေးတင်ထားတဲ့ပိုစ့်နဲ့ မနော်ဟရီရဲ့ တစ်ယောက်ယောက်က သားလေးကြိုက်လို့တီတီလေးကိုဖတ်စေချင်လို့ပို့ပေးခဲ့ဖူးတာသတိရတယ်
၇ာဇ၀င်များနဲ့ကဗျာပိုင်ရှင်လို့ ခေါ်ချင်ပါတယ် မအိဒ္နြာရဲ့ဘလော့ လေးကို ရောက်ခဲ့ တဲ့အခါပေါင်း အကြိမ်ပေါင်း မျောက်မြားစွာ မရေတွက်နိုင်အောင် ရောက်ခဲ့ ဘူးတာပါ ရောက်တိုင်းလဲမမန့် ခဲ့ ပါဘူး ဘလော့ ဂါ တယောက်မဟုတ်တဲ့ ကျနော့ အတွက် မန့် မရ တာလဲပါတာပေါ့နောက်တခုက စာအရေးသား ကောင်းလွန်းတော့ အမှန်တိုင်း ၀န်ခံရရင် မမန့် ရဲတာလဲပါတယ် ကျနော့ ခံယူ ချက်က (ကဗျာဟာဘ၀ ကဗျာ ကအင်အား ကဗျာသာလျှင် စွမ်းအား ကဗျာထဲမှာ အကြင်နာနဲ့မေတ္တာတရားတွေအပြည့် ပါသလို ကဗျာထဲမှာ ရင်ထဲကပြောချင်တဲ့ခံစားနေရတဲ့ဝေါဟာရတွေလဲသိန်းသန်းမ ကပါတယ် ကဗျာနဲ့လွှမ်းခြုံထားလို့ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်း နေတာပါ ) ဒီတခါတော့ကဗျာပိုင်ရှင်ရဲ့ ဘလော့ လေး တနှစ်ပြည့် မှာ မှတ်မှတ်ရရ ဂုဏ်ပြုချင်တာနဲ့ဒီကောမန့် လေးရေးပေးရင်းနဲ့အပြည့်အ၀ဂုဏ်ပြုပါရစေ ရိုးသားမှုဟာ ခင်မင်မှုကိုအဓွန့် ရှေဆိုသလို ရိုးသားစွာ ၀န်ခံရရင် မေတ္တာနဲ့ လွှမ်းခြုံထားတဲ့ကမ္ဘာကြီးပျက်ကွယ် ပျက်သုန်းမှာကိုတော့ကျနော်အပါဝင် တဦးတယောက်ကမှလိုလားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်မိပါတယ် ဒါ့ ကြောင့်ကမ္ဘာ မပျက်ခင်တလလို ဆိုတဲ့ ပို့ စ် လေးမျိုးတွေ မရေးစေချင်ပါဘူး နောင်လာမဲ့ အချိန်ကာလများစွာမှာ စာကောင်းပေမွန်တွေများများရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြု၇င်း အစဉ်မပျက် ခင်မင်လျှက် အားပေးနေမဲ့ခင်တတ်တဲ့သုဒြေ္နပါ
တယောလေး ကြွေမွသွားချိန်မှာ ခံစားနေရမယ့် တယောဆရာရဲ့ ဝိဥာဉ်ကို စာဖတ်သူဆီ အရောက်ပို့ပေးနိုင်တဲ့ စာတပုဒ်ပါပဲ...
ကျေးဇူးပါ အိန္ဒြာနဲ့ ဖိုးစိန်ရေ......